Manokana amin'ny famokarana slider nylon crane manana traikefa manan-karena |
Manokana amin'ny famokarana slider nylon crane manana traikefa manankarena
Ny slider nylon dia misy fiantraikany tsara amin'ny fanoherana sy ny fanoherana ny havizanana, ary ny fanoherana ny hovitrovitra dia tsara koa. Ny slane nylon crane dia manolo ny slider vy, izay tsy vitan'ny mitsitsy ny vidin'ny fikolokoloana, fa mampihena ihany koa ny tsindry amin'ny fahalotoan'ny tontolo iainana
Fiandohana: Huaian Jiangsu Fitaovana: Nylon, PA6 / MC
Anarana: Teknolojia Crane Nylon Slider: tsindrona / Casting Centrifugal / Processing CNC
Loko: santionany loko manokana: Mpividy vola
Marika: Tsindrona Haida: Casting Centrifugal
Amin'ny milina fananganana, ny slider dia ampahany tena ilaina. Ohatra, ny slider ho fanohanana ny baomba fiarakaretsaky ny kamio dia vita amin'ny varahina taloha. Ankehitriny, aorian'ny fampiasana ilay slider MC nylon, dia nitombo 4-5 heny ny ain'ny serivisy. MC nylon slider dia manana fiainana serivisy lava ary afaka mitazona fahombiazan'ny fanosotra mandritra ny fotoana maharitra aorian'ny famenoana solika indray mandeha. Mandritra izany fotoana izany dia manana tombony ihany koa ny fanoherana ny fiantraikany, fanoherana ny hovitrovitra, fanoherana ny havizanana, feo ambany, lanja maivana, fivoriambe mety ary fanoherana.
Tombony azo avy amin'ny crane nylon slider
1. Fampisehoana feno tsara, indrindra ny toetra mekanika tsara, ny fanoherana ny fiatraikany dia tsara kokoa noho ny thermoplastika ankapobeny, ny hafa toy ny fanoherana ny hafanana, ny fanoherana ny hafanana ambany, ny fanoherana simika, ny toetran'ny insulation elektrika, sns.
2. Mavesatra maivana ary mora soloina. Ahena ny hamafin'ny asa.
Ny fampiasana slane nylon crane: ny faritra tsy mahazaka sy manala fahasahiranana amin'ny milina, fitaovana, fiara, sns.
Fahaizana manome: Jereo ny habetsaky ny fividianana
Antsipiriany momba ny fonosana: Matetika izahay dia mampiasa sarimihetsika bubble sy baoritra baoritra, raha ilaina dia mampiasa paleta hazo na boaty hazo. Ny entana madinidinika dia fonosina ao anaty kitapo fanaovana sonia tena + baoritra. Ny entana lehibe dia fonosina ao anaty kitapo hazo + boaty hazo.
Previous: slider Nylon avo lenta ho an'ny karazana milina fanorenana
Manaraka: Famokarana matihanina amin'ny faritra ampiasain'ny fiara mandeha amin'ny kalitao azo antoka